Xasan Sheikh oo ka hor yimid in Ciidamada P/land lagu wareejiyo… |
Xasan Sheikh oo ka hor yimid in Ciidamada P/land lagu wareejiyo…
buy Kamagra Polo, buy clomid.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Somalia Xassan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah kaga hor imaaday go’aanka QM ay ku dooneyso in amniga xarumaha doorashooyinka lagu wareejiyo ciidamo ka tirsan Maamulka Puntland.
Madaxweyne Xassan oo ka duulaaya go’aan dhawaan kasoo baxay Xafiiska wakiilka gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Somalia Michael Keating ayaa qaadacay go’aankaasi oo qeexaaya in amaanka Xarumaha doorashooyinka lagu wareejin doono Ciidamo ka socda maamulka Puntland, waxa uuna Madaxweyne Xassan Sheekh sheegay inaanu jirin baahi muujineysa in ciidamo laga keenay Gobolo kale ay sugaan amniga.
Warqad qoraal ah uu Madaxweyne Xassan u diray wakiilka gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Somalia Michael Keating, ayaa waxa uu kaga hor imaaday go’aankaasi isaga oo sheegay in go’aanka noocaasi ah uu niyad jab galin karo ciidamada ka howlgala magaalada Muqdisho ee Qaraxyada ku dhamaanaaya.
Xassan Sheekh ayaa warqadaasi ku codsaday in Mr Michael Keating uu ka laabto qorshaha qeexaaya in ciidamo laga soo daabulo deegaanada Puntland si ay u sugaan amniga.
Madaxweyne Xassan ayaa ku doodaaya in go’aankaasi uu mooraal jab galinaayo Ciidamada hadda ku sugan magaalada Muqdisho sidaa aawgeedna aysan jirin niyad ay ku aqbali karaan go’aankaasi.
Beesha Caalamka ayaa dooneysa in Siyaasad ay u adeegsadaan Dowlada Somalia iyo Maamul Goboleedyada si awooda Dowlada ay u noqoto mid daciif ah oo aad uga hooseysa maamul Goboleedyada.
Ma jirto wax jawaab ah oo kasoo baxay wakiilka gaarka ah ee QM u qaabilsan arrimaha Somalia Michael Keating, waxaana suuragal ah in QM ay ku adkeysato go’aankeeda.